Izikolo ezi-5 eziphambili zaseLondon
Oktobha 19, 2021 UHarrison uGrace
ngezantsi linqaku elibonisa ukucaca kwizikolo ezi-5 eziphambili zaseprayimari eLondon, iindawo zabo, kunye nombono.
ILondon (yenye yezona ndawo zinabantu abaninzi) likomkhulu lase-United Kingdom. Sesinye sezona zixeko zidala emhlabeni. Ithathwa njengeziko laseBritani lenkcubeko, ezoqoqosho kunye nezothutho.
ILondon imi kuMazantsi mpuma eNgilani, imi ngakwicala loMlambo iThames (oziimayile ezingama-50 ukunyuka komfula) ukusuka kumazibuko echweba kuLwandle lwaseMantla.
Icandelo lemfundo laseLondon linegama elihle kakhulu kubafundi abaninzi abavela e-UK nakwihlabathi liphela abahamba isikolo apha. Eli candelo lihlanganisiwe liSebe lezeMfundo kunye neSebe lezoShishino - uBuchule kunye neZakhono. Oogunyaziwe bengingqi (LAs) banoxanduva lokuphumeza umgaqo-nkqubo wezemfundo zikarhulumente kunye nezikolo zikarhulumente kwinqanaba lommandla.
Icandelo lemfundo lahlulwe:
Kwizikolo ezi-5 eziphambili zaseprayimari eLondon, kubantwana abaphakathi kweminyaka emi-5 ukuya kweli-18, imfundo yamabanga aphantsi inyanzelekile, nokuba sesikolweni okanye kumaziko oqeqesho. Emva kweminyaka eyi-16, abafundi banokukhetha ukuqhubeka nezifundo zabo eziziisekondari kangangeminyaka emibini, uninzi lwabafundi luthatha amabanga emfundo kwinqanaba A. Ezinye iziqinisekiso kunye nezifundo eLondon zibandakanya iziqinisekiso zeBhunga lezeMfundo lezoShishino kunye neTekhnoloji (BTEC), i-International Baccalaureate (IB), kunye neCambridge Pre-U.
Inkqubo ezimbini (2) zezikolo zezi:
Izikolo zikarhulumente kunye
Izikolo zikarhulumente, ezihlala zibizwa ngokuba zii "Izifundo", ziqhutywa yimibutho yabucala. Bafumana iimali zikarhulumente kwaye balawulwa liGunya lezeMfundo laseKhaya. Uninzi lwezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon ezithathwa njengeZikolo zikaRhulumente mhlawumbi ziComprehensive, iSiseko, okanye iZikolo zeGrama kunye neZikolo eziSimahla.
Kwizikolo zaseprayimari ezigqwesileyo eLondon, bonke abafundi bathatha iiMvavanyo zeKharityhulam yeSizwe (ekwabizwa ngokuba zii-SATs, zona zii-Standard Attainment Tests) kwizifundo eziphambili ezinje ngoLwazi lokuFunda nokuBhala, ukuBala, kunye neNzululwazi phantsi kweKharityhulam kaZwelonke ekupheleni konyaka wesi-6.
1 Ezona zikolo ziBucala ziPhambili zabucala eLondon
2 Izikolo zasePrayimari eziBalaseleyo zaseLondon
3 Izikolo zasePrayimari eziBalaseleyo eLondon
3.1 1. UMoya oyiNgcwele uPeter noSt Paul Paul
3.2 2. IStephen's CE Isikolo samabanga aphantsi
3.3 3. KwiMpuma Wickham Primary Academy
3.4 4. ISt. John neSt James Cof E Isikolo samabanga aphantsi
3.5 5. Isikolo iTurriano Prayimari
3.6 6. Isikolo samabanga aphantsi iBelleville, iClapham
3.7 7. Isikolo seNdlu yaseNorthbridge, ePrimrose Hill
3.8 8. Isikolo iJohn Ball Prayimari, iBlackheath
3.9 9. ISt. George's Church of England Isikolo samabanga aphantsi
3.10 10. Isikolo samabanga aphantsi iPerrymount
3.11 11. Isikolo samabanga aphantsi i-Earlsfield
3.12 12. Isikolo samabanga aphantsi iChalgrove
3.13 13. ISt. John Vianney RC kwisikolo samabanga aphantsi
3.14 14. Isikolo samabanga aphantsi iAmbler kunye neZiko laBantwana
3.15 15. Isikolo samabanga aphantsi iColdfall
4 I-FAQs kwezona zikolo ziBalaseleyo zaseLondon
4.1 1. Bungakanani ubudala besikolo saseprayimari eLondon?
4.2 2. Ngaba umntu wasemzini angamkelwa kwisikolo sikarhulumente saseprayimari sikarhulumente eLondon?
4.3 3. Yeyiphi indawo yaseLondon enezona zikolo zaseprayimari eziphambili?
Ezona zikolo ziBucala ziPhambili zabucala eLondon
ILondon inezikolo ezininzi zaseprayimari ezigqwesileyo zabucala apho abantwana kunye nabafundi bafunde kakhulu. Nangona kunjalo, uninzi lwezikolo zaseprayimari “zizikolo zamantombazana kuphela” okanye “zamakhwenkwe kuphela”.
Ngokwenqanaba laseburhulumenteni, ezona zikolo zibalaseleyo zaseLondon ezithathwa njengezikolo zabucala kunye neendawo zazo zezi zilandelayo:
Isikolo saseNorth London Collegiate (Harrow)
Isikolo seKing College (eWimbledon)
IsiXeko saseLondon iSikolo saMantombazana (IsiXeko saseLondon)
Isikolo samabanga aphakamileyo iSouth Hampstead (Hampstead)
Isikolo iYunivesithi yaseCollege (iHampstead)
Isikolo samantombazana sikaJames Allen (eMpuma Dulwich)
Isikolo samabanga aphakamileyo iWimbledon (Wimbledon)
Indlu yeNkundla yaseHampton (Hampton)
Isikolo samabanga aphakamileyo (Isikolo samabanga aphakamileyo)
I-Notting Hill kunye ne-Ealing High School (ukuThengisa)
Izikolo zasePrayimari eziBalaseleyo zaseLondon
Akukho myalelo ukhethekileyo, ezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon ezithathwa njengezikolo zikarhulumente eziphambili zezi zilandelayo:
Isikolo samabanga aphantsi iFox (eKensington naseChelsea)
Isikolo samabanga aphantsi iSt Joseph's RC (iBrent)
Isikolo samabanga aphantsi iThomas Jones (iKensington kunye neChelsea)
Isikolo samabanga aphantsi iBousfield (iKensington ne-Chelsea)
Isikolo seCathedral sikaSt uMsindisi kunye noSt Mary Overy (Southwark)
Isikolo seLondon Oratory (eHammersmith naseFulham)
Isikolo samabanga aphantsi iSt Peter's Catholic Primary (iGreenwich)
Isikolo i-Sir William Burrough Primary School (kwiHolo yeHamlets)
ISt. John kunye neSt James Church yaseNgilani iSikolo samaBanga aPhantsi (iHackney)
Isikolo samabanga aphantsi sasePaxton (uLambeth)
Izikolo zasePrayimari eziBalaseleyo eLondon
Akukho myalelo ukhethekileyo, apha ngezantsi luluhlu lwezona zikolo zi-5 zibalaseleyo kwizikolo zaseprayimari eLondon:
ISt. Peter kunye neSt. Paul Catholic Isikolo samabanga aphantsi
Isikolo samabanga aphantsi iSt Stephen's CE
Isikolo samabanga aphantsi i-EastWickham
ISt John kunye neSt James CofE Primary School
Isikolo samabanga aphantsi iTorriano
Isikolo samabanga aphantsi iBelleville
Isikolo seNdlu yaseNorthbridge
Isikolo samabanga aphantsi iJohn Ball
Icawa yaseSt. George yaseNgilani
Isikolo samabanga aphantsi iPerrymount
Isikolo samabanga aphantsi i-Earlsfield
Isikolo samabanga aphantsi iChalgrove
Isikolo samabanga aphantsi iSt. John Vianney RC
Isikolo samabanga aphantsi i-Ambler kunye neZiko laBantwana
Isikolo samabanga aphantsi iColdfall
1. UMoya oyiNgcwele uPeter noSt Paul Paul
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikumazantsi eMonti eMonti, kanye eSt.Paul Wood Hill, eBromley, kuMazantsi eMonti.
Esi sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon esivulelekileyo abantwana ukusukela kwiminyaka yobudala eyi-5-11. Akukho bhodi esikolweni. Inani elikhulu labafundi ngabantwana abavela kwiCawa yamaRoma Katolika.
Umbono wesikolo kukufumana imfundo esemgangathweni kubomi babafundi ngokufundisa kakuhle. Bafundisa ubunkokeli nolawulo olululo phakathi kwabafundi.
Tyelela iwebhusayithi: http://www.saintpeterandsaintpaulcatholicprimary.co.uk
2. IStephen's CE Isikolo samabanga aphantsi
Sesinye sezona zikolo zaseprayimari ezibalaseleyo eLondon ezikumazantsi oMzantsi London eLondon, eWinchester Road, eRichmond phezu kweThames, eMzantsi West London.
Sisikolo esincedwa ngokuzithandela esivulelekileyo kubantwana abakwiminyaka yobudala be-4-11. Sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon ezivulelekileyo kubo bonke abantu besini esahlukileyo kwaye ezingabamkeli abantu abahamba ngebhodi.
Esi sikolo saseprayimari sinabantu abaninzi ngakumbi abavela kwimvelaphi yenkolo yeCawa yaseNgilani. Esi sikolo saseprayimari sonyusa ubomi bezemfundo babafundi ngokuphucula ubuchule babo ekufundeni, ekubhaleni nasekuzibandakanyeni ekubaleni ngokusengqiqweni.
Sesinye sezona zikolo zaseprayimari ezilungileyo eLondon ezibonelela ngokutya simahla esikolweni kubafundi abakulungeleyo ukufumana izidlo zesikolo sasimahla.
Jonga iwebhusayithi yesikolo: http://www.st-stephens.richmond.sch.uk
3. KwiMpuma Wickham Primary Academy
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikumazantsi eMonti eMonti, ngokuchanekileyo kwisitalato iWickham, eBexley, kuMazantsi eMonti.
I-East Wickham sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezinkulu nezinempumelelo, ezinemoya efudumeleyo nenenkathalo. Ime kwindawo entle eluhlaza kwaye inokufikelela kumhlaba omkhulu owabelwana ngawo phakathi kwezakhiwo zawo.
Ngasemva kwesikolo yindawo evulekileyo, enika imeko yesikolo ukuba ibe nemvakalelo yokuba semaphandleni. Isakhiwo sesikolo sinepaseji ephambili enamaphiko kwelinye icala. Amagumbi okufundela makhulu kwaye anomoya.
Esi sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon ezivulelekileyo kubo bonke abantu besini sabantwana abakwiminyaka engama-3-11 ubudala. Akukho bhodi esikolweni. Abantwana kwesi sikolo banokuba nayiphi na imvelaphi yenkolo.
Tyelela iwebhusayithi: www.ewp-tkat.org
4. ISt. John neSt James Cof E Isikolo samabanga aphantsi
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikwi-Isabella Road, eHackney, eHackney, eMantla Mpuma.
Sisikolo esincedwa ngokuzithandela esivulelekileyo kubantwana abakwiminyaka yobudala be-2-11. Sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon ezivulelekileyo kubo bonke abantu besini esahlukileyo kwaye ezingabamkeli abantu abahamba ngebhodi.
Jonga iwebhusayithi yesikolo:
5. Isikolo iTurriano Prayimari
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikumNtla Ntshona London kwiTorriano Avenue, eKentish Town, eCamden, eMntla Ntshona London.
Sisikolo soluntu esivulekileyo kubantwana abaneminyaka yobudala ukusuka kwi-3-11 iminyaka. Sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon ezivulelekileyo kubo bonke abantu besini esahlukileyo kwaye ezingabamkeli abantu abahamba ngebhodi.
Isikolo sivulelekile kubo bonke abafundi nokuba bakwinkolo enjani. Esi sesinye sezona zikolo zaseprayimari ezigqwesileyo eLondon ezizinikeleyo ekubekeni iNgqungquthela ye-UN yamaLungelo oMntwana embindini weenqobo zabo zokuziphatha kunye nokuziphatha ngenkolelo yokuba ukuthatha inxaxheba kwabantwana kubalulekile kuyo yonke imiba yobomi besikolo.
Iziphumo zoku kukuziva ukhuselekile kunye nokuzithemba okubavumela ukuba bathathe inyathelo elilandelayo ekukhuthazeni amalungelo abantwana kuyo yonke indawo. Le nkolelo ikwakhuthaza imeko yoluntu, intlonipho noxanduva. Ikhuthaza abantwana ukuba babe ngabemi abakhutheleyo nabanolwazi, abajonga ukukhulisa ikamva eliqinisekileyo.
Jonga iwebhusayithi yesikolo: http://www.torriano.camden.sch.uk
6. Isikolo samabanga aphantsi iBelleville, iClapham
Ime eMzantsi London. Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon esentliziyweni yeClapham 'yeNappy Valley'. I-Belleville sisikolo sikarhulumente esinomfundi onomtsalane kumyinge wootitshala ekunqabileyo ukuba usifumane kwicandelo likarhulumente laseLondon.
IBelleville sesinye sezona zikolo zaseprayimari ezibalaseleyo eLondon ezinokuqaqamba okungaguquguqukiyo kumgangatho wesikolo ophawulwe ngumnqweno ongapheliyo wokufuna ukuphucula, ukugqwesa kunye nomgangatho.
Khangela website ngolwazi olungakumbi.
7. Isikolo seNdlu yaseNorthbridge, ePrimrose Hill
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikumantla eLondon. Inendlela emnandi kunye neyobuchule kwimfundo ehlangatyezwa kukuqhuba kwezemfundo kunye nendawo yamanye amazwe kwisikolo sonke.
Abantwana abaya kwesi sikolo banako ukugqiba kwindawo enye emva kwe-Nursery ngaphambi kokuba baye eyunivesithi.
Hlola zabo website ngolwazi olungakumbi.
8. Isikolo iJohn Ball Prayimari, iBlackheath
Esi sesinye sezona zikolo ziphambili zaseLondon ezikwiMonti. Esi sikolo saziwa ngemvakalelo yokubaluleka komfundisi-ntsapho ngamnye kumntwana ngamnye.
UJohn Ball sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon eziqinisekisa ukuba wonke umntwana ukhuselekile, ukhuselekile kwaye wonwabile, eyindlela abayisebenzisayo ukwakha isiseko esomeleleyo sokuphuhliswa kwabafundi babo kwizifundo.
9. ICawa yaseSt. George yaseNgilani Isikolo samabanga aphantsi
Sesinye sezona zikolo zaseprayimari ezibalaseleyo eLondon emi kuMazantsi eMonti (Coleman Road, Camberwell, Southwark, South East London ngokuchanekileyo).
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezihlelwa njengezikolo zokuncedisa ngokuzithandela. Kuvulelekile kubantwana abaphakathi kweminyaka emi-4-11 ubudala.
Sesinye sezona zikolo ziphambili zaseLondon ezivulelekileyo kubo bonke abantu besini kwaye sisebenza njengesikolo sosuku.
Ukuphumelela ngokubanzi kwabafundi, umgangatho wokufundisa, ukhuseleko kwindlela yokuziphatha kunye nentlalontle, ubunkokeli, kunye namandla okuphatha zilungile.
Sikhokelwa ziinqobo zethu ezisemgangathweni zentlonipho, impumelelo kunye nobukroti, isikolo sibonelela ngekharityhulamu ebanzi nelungeleleneyo ekhulisa abafundi, ibhiyozela ubuntu kunye nokuyila ngelixa ibakhokelela kwimpumelelo yokufunda.
Tyelela abo website ngolwazi olungakumbi.
10. Isikolo samabanga aphantsi iPerrymount
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikwiSunderland Road, eForest Hill, eLewisham, eMzantsi Mpuma London.
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon sisikolo soluntu. Iyakwamkela abantwana ukusuka kubudala beminyaka emi-3-11. Sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon ezisebenza njengesikolo sosuku.
Isikolo sijolise ekwakheni indawo ekhuselekileyo, eyamkelekileyo nenenkathalo, apho bonke bahloniphayo kwaye besebenza kunye njengendawo yokuhlala, yabantwana, yeentsapho zabo kunye neyabasebenzi. Bafundisa bonke abafundi ukuba baxabise uluntu kunye neenkolo ezahlukeneyo kwaye bahloniphe kwaye baqonde indlela abantu abaphila ngayo kunye nemvelaphi yabo. Hlola zabo website ngolwazi olungakumbi
11. Isikolo samabanga aphantsi i-Earlsfield
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezibekwe kwiTranmere Road, eWandsworth, eMzantsi Ntshona London.
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon esithathwa njengesikolo soluntu. Yamkela bobabini isini ukusuka kubudala beminyaka emi-3-11.
Ihlala kuphela abafundi bemini. Iyaziwa ngokusebenza kwayo ngokubalaseleyo kwizifundo. Khangela oku website ngolwazi olungakumbi.
12. Isikolo samabanga aphantsi iChalgrove
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikwiiChalgrove Gardens, eFinchley, eBarnet, eMantla eLondon.
Sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon esithathwa njengesikolo soluntu kwaye samkela abantwana bazo zozibini izini ukusuka kwiminyaka eyi-4-11. Ayibangenisi abantu abahlala boarder.
13. ISt. John Vianney RC kwisikolo samabanga aphantsi
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezibekwe eStanley Road, eTottenham, eHaringey, eMantla eLondon.
Sisikolo esincedwa ngokuzithandela, esihlala bonke abantu besini ukusuka kwiminyaka emi-3 ukuya kweli-11. Sesinye sezona zikolo zaseprayimari eziphambili eLondon eziqhuba isikolo sosuku kwaye sinomgangatho wokusebenza obalaseleyo ngokwemfundo, ubunkokeli.
Esi sikolo sikhuthaza uphuhliso lwenkolo yobuKatolika ngokufundisa okuxabisekileyo kweVangeli kwindawo enenkathalo apho umntu ngamnye exatyiswa kwaye ehlonitshwa. Ngaloo ndlela, baphuhlisa izipho zabo bonke abafundi babo ukuze bandise amandla abo ukuze bazuze awona aphezulu.
14. Isikolo samabanga aphantsi iAmbler kunye neZiko laBantwana
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikwiBlackstock Road, Finsbury Park, Islington, North London.
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon esithathwa njengesikolo soluntu. Yamkela yonke iminyaka ukusuka kwiminyaka emi-3 ukuya kweli-11. Isebenza njengesikolo sosuku.
Sesinye sezona zikolo zaseprayimari ezibalaseleyo eLondon ezinabafundi abanomgangatho obalaseleyo wazo kootitshala babo.
Kwesi sikolo saseprayimari esisesona sigqwesileyo eLondon, ootitshala bazama ukwenza ubudlelwane obungcono kunye nabafundi babo ngokujonga ukuqonda komfundi ngendlela efanelekileyo, bachonge iimpazamo zabo ngokuchanekileyo, kwaye banike ingxelo ecacileyo nengqalileyo kubafundi babo.
15. Isikolo samabanga aphantsi iColdfall
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon ezikwiColdfall Avenue, Muswell Hill, Haringey, North London.
Sesinye sezona zikolo zihamba phambili zaseLondon esithathwa njengesikolo soluntu. Iyakwamkela abantwana ukusuka kubudala beminyaka emi-3-11. Isebenza njengesikolo sosuku.
Isikolo sinomgangatho obalaseleyo wokufundisa kootitshala kwaye sizama ukuseka isiseko esihle semfundo sabafundi ngokusebenzisa izixhobo zokufundisa, ubunkokeli, kunye neeklasi zolawulo, ukubethelela ukhuseleko lokuziphatha kunye nokhuseleko kubafundi.
Khangela oku website ngolwazi olungakumbi.
I-FAQs kwezona zikolo ziBalaseleyo zaseLondon
1. Bungakanani ubudala besikolo saseprayimari eLondon?
A: Ubudala besikolo saseprayimari eLondon buvela kwiminyaka eyi-4-11.
2. Ngaba umntu wasemzini angamkelwa kwisikolo sikarhulumente saseprayimari eLondon?
A: Kude kube ngumhla wama-31 kuDisemba 2020, yonke iMimandla yezoQoqosho yaseYurophu ('i-EEA'), kunye nabantwana bakazwelonke baseSwitzerland, banelungelo lokuhamba ngenkululeko kunye nomthetho wase-UK wokungena, ukungena kweli lizwe ukufikelela kwisikolo.
Nayiphi na i-EEA okanye ilizwe laseSwitzerland elifike e-UK nge-31 ngo-Disemba 2020 banelungelo lokufaka isicelo kwi-EU Settlement Scheme, kwaye baqhubeke nokukwazi ukufunda kwizikolo zaseLondon naseNgilane ngokubanzi njengoko besenza ngoku ukuba isicelo sabo siphumelele.
Inkululeko yokuya e-UK ye-EEA kunye nabemi baseSwitzerland iphele ekupheleni kuka-2020. I-EEA (abemi baseIreland bucala) kunye nabantwana besizwe baseSwitzerland abangena e-UK emva kokuphela kowama-2020 ngoku baphathwa ngokufanayo nabanye abantu bamanye amazwe.
Oku kuthetha ukuba abasayi kuba nelungelo lokungena kweli lizwe ukufikelela kwisikolo esixhaswa ngemali ngurhulumente ngaphandle kokuba bangena kwezi ndidi zilandelayo zokufuduka. Abantwana abaneminyaka engaphantsi kwe-18 banokungena e-UK, njengomntu oxhomekeke kwilizwe langaphandle oye wazinza e-UK, njengomntu oxhomekeke kubazali babo abase-UK kwi-visa yomsebenzi okanye i-visa yabafundi, okanye abayinxalenye yosapho olungena okanye oluhlala e-UK phantsi kwendlela yokufudukela kubemi base-Bhritane (i-Overseas) kunye nabaxhomekeke kubo.
Aba bantwana baxhomekeke kubo banelungelo lokungena kweli lizwe kwaye banokufunda kwisikolo esixhaswa ngurhulumente okanye esizimeleyo kwakanye e-UK. Abantwana abaxhomekekileyo abangafiki e-UK ngaxeshanye nabazali babo kuya kufuneka benze isicelo se-visa ngokwahlukeneyo njengomntwana oxhomekeke kubo.
3. Yeyiphi indawo yaseLondon enezona zikolo zaseprayimari eziphambili?
A: Imbali ithi iKensington ne-Chelsea banezona zikolo zihamba phambili eLondon. Olu luhlu lubonisa ukuba ngaphezulu kwesibini kwisithathu (i-67%) yezikolo ezikuloo ndawo zikalwe nge-Outsted.
Oku kubonakala kumaxabiso epropathi, kunye namakhaya akule ndawo ebiza kakhulu-yiyo loo nto yenza ukuba indawo ebiza kakhulu ibe yeyokuhlala eNgilane.
I-Rushmoor kunye ne-Woking bangena kwindawo yesibini, ngesiqingatha (i-50%) yezikolo kuwo omabini la mabhunga zilinganiswe ngokubalaseleyo.
Ukuqukumbela, kukho uninzi lwezona zikolo zibalaseleyo zaseLondon ezibonelela ngemfundo esemgangathweni kodwa ebiza kakhulu.
Ubungcali boBugcisa boBunjineli baBafundi beZizwe ngeZizwe, iYunivesithi yaseLondon 2020
Izikolo ezi-13 eziPhambili zeBhodi e-England yaBafundi beZizwe ngeZizwe
Isidanga sokuqala kwiDyunivesithi yaseLondon yeeNkokeli zeHlabathi zeSayensi e-UK, 2019
Ungasifaka njani isicelo seDyunivesithi yase-UK-Isikhokelo seNyathelo nenyathelo
Izikolo eziphambili zaseLondon
Post Previous:Iinkqubo ezili-10 eziPhambili zeAutism kwiZikolo zikaRhulumente
Okulandelayo Post:Ngaba i-Cannabis ingakunceda ufunde ngcono?